Ikhwalithi ye-Hydraulic Hinge Clip-on 3D Aguqukayo Umkhiqizi Oguqukayo we-V-Ham Stendement Presement | Angeza
Insizakalo yokumisa isixazululo esisodwa se-Hardware yefenisha.
Ibhola elithwele isilayidi
Isibambo sensimbi engenasici
Ikhaya > Imikhiqizo > Ingibe
Ikhwalithi ethambile yokuvala i-3-Fold Ball Bearing Slide Protect | Angeza
I-Hydraulic hinge clip-on | Angeza
Ikhwalithi Yezilayidi Ezingaphezulu Kwebhola Lebhola Elibhekele | Angeza
Inkampani engcono kakhulu yensimbi yensimbi
I-Hydraulic hinge Clip-on 3D engaguquguquki ye-V-Shape Breament iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., Futhi ijabulele idumela elihle emakethe Imikhiqizo eyedlule, futhi ngokuqhubekayo ibathuthukisa. Ukucaciswa kwesiqeshana se-hydraulic hinge clip-on 3D Isisekelo se-V-Tape Isisekelo senziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
I-Hardraulic ye-ONLINE YAMABHODI YESIBILI HOLDRAULIC nge-3D Ukulungiswa okuvela ku-addmith Hardware nge-Addith Craft kanye nentengo esebenza ngezindleko.Addith prop.addith insizakalo yohlelo lokusebenza lwe-Hinge.
I-Hydraulic hinge clip-on nolungiselelo lwe-3D (indlela emibili)
Ipuleti lokufaka elimisiwe
Ngokusekelwa kwethimba lesevisi eliqeqeshiwe, i-AddITH inesincomo esiphezulu kusuka kumakhasimende.
1. Yiliphi igama lokukhokha?
Imvamisa i-T / T, L / C noma abanye ngezingxoxo.
2.Yini umthamo wokulayisha esitsheni esingu-20ft futhi kungenzeka yini ukulayisha imikhiqizo yokuxuba esitsheni esisodwa?
Amandla okulayisha max ancike emikhiqizweni nasendleleni yokupakisha oyicelile, sizoqinisekisa imininingwane ngemuva kokuqinisekisa i-oda, imikhiqizo yokuxuba esitsheni esisodwa yamukelekile.
3. Singakwazi yini ukwazi ikhwalithi ngaphambi kokubeka i-oda lesilingo?
Okokuqala, sizonikeza amasampula wamahhala ngaphambi kokubeka i-oda lesilingo sokuhlolwa kwakho kwekhwalithi, ngemuva kwesikhathi soku-oda sizokuthumela isampula yokukhiqiza ngaphambi kokuhlola imininingwane yomkhiqizo futhi. Futhi sihlala sinokulawulwa kwekhwalithi okuqinile ngesikhathi senqubo yethu yokukhiqiza ukugwema inkinga yekhwalithi. Ngaphandle kwalokho, siphase ukuhlolwa kwekhwalithi ngokususelwa ezingeni elihlukile lezwe ukufakazela ikhwalithi yethu enhle kakhulu esibonisa yona izobaluleka.
Isiqinisekiso sabezizwe esisezingeni eliphakeme
I-Oncorthy Of Trust: Sinabasabalalisi abaningi emhlabeni wonke futhi bajabulela idumela eliphakeme e-US, eYurophu nase-Asia. Njengamanje sinenethiwekhi yokusabalalisa emazweni angaphezu kwangu-20 ngaphezulu kwethu, eYurophu nase-Asia. Sicela usazise ukuthi yini esingakwenzela yona. Uyemukelwa ukuze ube ngumsabalalisi wethu omusha emakethe yakho, ubheke phambili ekubambisaneni okudala isikhathi eside!
I-3.Excellent Ngemuva kwenkonzo yokuthengisa: Sinikeza mahhala futhi sihle kakhulu ngemuva kwenkonzo yokuthi zonke izimpahla ziphinde zithengiswe, uma kukhona icala ngathi, sizoyixazulula inkinga yolwazi lokuqala ngemuva kokunikeza ubufakazi bemininingwane yangaphambilini.
I-4.Cuskomized Service: Siqoqe umthombo omkhulu cishe cishe ama-Hurmare we-Hurmare ahlobene nawo wonke ama-China, lokhu kusenza sikwazi ukukunikeza noma yiziphi izixazululo ezengeziwe zenani. Noma iyiphi insiza eyenziwe ngokwezifiso esingasekela engakusiza ukukhuthaza ibhizinisi elizohamba.
Shanghai addith Hardware Co Ltd yi- Umhlinzeki wefenisha wefenisha ochwepheshe eneminyaka eminingi yesipiliyoni. Sinikezela ngezinkulungwane zemikhiqizo kubandakanya uhla oluphelele lwe-Hardware yefenisha efana ne-hinge, isilayidi, isibambo, ukukhiya, isikulufa, umlenze wetafula neminye imikhiqizo ehlobene. Sithole izimvume njenge China, e-European and American Quality Callevel. Sinabasabalalisi abaningi emhlabeni wonke futhi sijabulela idumela eliphakeme e-US, eYurophu nase-Asia. Ikhwalithi ethembekile, insizakalo eguquguqukayo kanye nokwenziwa okusha kwe-tenet yethu. Sihlala sisebenzela ukuthuthukisa futhi sidala inani labalingani bethu. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu okucebile, Iqembu Lobungcweti kanye noHlelo Lokusebenza Oluthembekile, nathi sithathwa njengamakhasimende ' Ukuthenga ihhovisi eChina. Siyajabula ukuba nemidwebo yakho namasampula ukuthuthukisa imikhiqizo emisha, futhi sizohlanganisa izinsiza zomkhakha ngempumelelo futhi silawule izindleko ngokuqinile ukwenza inzuzo enkulu kumakhasimende. Silindele ngobuqotho ukubambisana nawe. Ifilosofi yethu yebhizinisi kufanele ibe uhlobo lomkhiqizo onokwethenjelwa wefenisha kanye nokwakha inani lamakhasimende ethu, abahlinzeki, kanye nomphakathi. Intuthuko yethu ivela ekuphishekeleni okungasebenzi nokungasebenzi kahle. Sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zohlobo oluthile lwabakhona namakhasimende akhona. Faka ngokukhethekile ekuhlinzekeni imikhiqizo esebenza ngezindleko ngensizakalo yekhwalithi. Noma nini lapho udinga ukwesekwa komkhiqizo, amasampula, izikhathi zokukhiqiza ezisheshayo, ukuphuma okwengeziwe ... I-Addith ihlala ilapha kuwe! Xhumana nathi manje ukuze uqale ukudonsa.
Uhlobo: I-Hydraulic hinge clip-on nolungiselelo lwe-3D (indlela emibili)
Umsebenzi: Ipuleti lokufaka elimisiwe
Ukuvula I-Angle: I-105 °
Ukujula kweNdebe ye-Hinge: 11.3mm
Ububanzi beNdebe yeHinge: 35mm
Ubukhulu bomnyango ongakukhetha: 14-22mm
Izinto eziphambili: Insimbi egoqiwe ebandayo
Qeda: I-Nickel Plated
Isisekelo Esikhona: 2 Hole Base, 4 Hole Base, V-Shape Base
Izesekeli Ongakukhetha: Ikhava yenkomishi, ikhava ye-ARM
Usayizi: Sga1600a - Cover Egcwele, Sga1600B - Isigamu sekhava, SGA1600C - Faka
Isitifiketi: I-ISO 9001/2000
Iphakheji: Imvamisa umbhangqwana ngamunye ku-polybag ngezikulufo, ama-100 ngababili ebhokisini le-carton, noma ukupakisha njengezindleko zakho.Extra izindleko zizocelwa ukufakwa okukhethekile njengebhokisi elinemibala, ukupakishwa kwe-blister, kanye nokunye.
Usuku lokuthumela: Zizungeze izinsuku ezingama-25-45 ezisuselwa ku-oda lakho le-oda
Ukuhlinzekela amandla: I-1,0000,000 PCS / Inyanga
Isikhathi sokukhokha: T / t, l / c noma abanye ngezingxoxo.
Amasampula anikezwa: Sizonikeza amasampula wamahhala wokuhlola ikhwalithi.
Ukuhlelwa kwamasampula: Amasampula azolungiswa ukuthumela ngezinsuku ezi-3 ezisebenzayo nge-Express efana ne-DHL, ups, TNT, FedEx noma i-EMS.
1. Ukusebenzisa insimbi esezingeni eliphakeme ebandayo njengento eluhlaza okwesibhakabhaka, kanti ingaphezulu le-nickel elibushelelezi futhi elibushelelezi elibushelelezi, ngakho-ke akulula ukugqwala nokuqina.
2. Isiqeshana se-Clip, okulula ukwehla ngokushesha, okwenza iphaneli yomnyango ibe lula ukweqa futhi ifake ngokushesha.
3. Sebenzisa i-buffer eqinile neqinile, ngomsebenzi wokuvala othomathikhi, ngemuva kokudonswa, umnyango ungavalwa kahle futhi uthule kancane futhi buthule lokho ngaphandle komsindo onomsindo.
4. Lolu hlobo lwe-hinge lunomsebenzi we-buffer we-buffer ezimbili, ipaneli lomnyango lingamiswa ebangeni lama-110 ° kuya ku-45 ° ngentando, futhi lapho iphaneli yomnyango livalwe libe ngu-45 °, lingazenzakalelayo nangomnene kuvaliwe ngemuva kokuvumela ukuhamba.
5. Idizayini ye-hinge eguquguqukayo emithathu eguqukayo, iphaneli yomnyango ingalungisa ibanga phezulu naphansi, kwesokunxele nakwesokudla, ngaphambili nangemuva, okulungele ukuthi uguqule ngokwesimo sangempela sohlelo lokusebenza.
6. I-V-Shaped Base Design ithandeke ngokwengeziwe yimakethe futhi kulula ukuwina ukuthandwa kwamakhasimende okugcina.
7. Izesekeli zokuzithandela, zingahlonyiswa ngesembozo esihambelana nengalo, ikhava yenkomishi noma ezinye izesekeli ngokuya ngezidingo zakho.
IShanghai Addith Hardware Co Ltd ngumhlinzeki we-Hurmare wefenisha ochwepheshe neminyaka eminingi yesipiliyoni. Sinikezela ngezinkulungwane zemikhiqizo kubandakanya uhla oluphelele lwe-Hardware yefenisha efana ne-hinge, isilayidi, isibambo, ukukhiya, isikulufa, umlenze wetafula neminye imikhiqizo ehlobene. Sithole izimvume njenge China, e-European and American Quality Callevel.
Sinabasabalalisi abaningi emhlabeni wonke futhi sijabulela idumela eliphakeme e-US, eYurophu nase-Asia. Ikhwalithi ethembekile, insizakalo eguquguqukayo kanye nokwenziwa okusha kwe-tenet yethu. Sihlala sisebenzela ukuthuthukisa futhi sidala inani labalingani bethu.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu okucebile, iqembu labaqeqeshi kanye nohlelo lwesevisi olubhekele, nathi lubhekwa njengehhovisi lokuthenga lamakhasimende eChina. Siyajabula ukuba nemidwebo yakho namasampula ukuthuthukisa imikhiqizo emisha, futhi sizohlanganisa izinsiza zomkhakha ngempumelelo futhi silawule izindleko ngokuqinile ukwenza inzuzo enkulu kumakhasimende. Silindele ngobuqotho ukubambisana nawe. Ifilosofi yethu yebhizinisi ukuba ngumkhiqizo onokwethenjelwa wefenisha kanye nokwakha inani lamakhasimende ethu, abahlinzeki, kanye nomphakathi. Intuthuko yethu ivela ekuphishekeleni okungasebenzi nokungasebenzi kahle.
Sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zohlobo oluthile lwabakhona namakhasimende akhona. Faka ngokukhethekile ekuhlinzekeni imikhiqizo esebenza ngezindleko ngensizakalo yekhwalithi.
Noma nini lapho udinga ukwesekwa komkhiqizo, amasampula, izikhathi zokukhiqiza ezisheshayo, ukuphuma okwengeziwe ... I-Addith ihlala ilapha kuwe!
Xhumana nathi manje ukuze uqale ukudonsa.
Singazi kanjani okuningi ngenkampani yakho nomkhiqizo oyinhloko?
Singumhlinzeki we-hardware ochwepheshe kakhulu wefenisha, obhekele ezengezo zefenisha iminyaka eminingi, futhi uhlobo lwethu "uqobo lwawo" I-addmith "luyathengisa kahle emazweni amaningi akwazi ukunikela ngemikhiqizo yakho esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo efanelekile. Imikhiqizo yethu eyinhloko yile: Hinge, Slide, isibambo, ukusekelwa, ukukhiya, isikulufa, umlenze wethebula, amabhasikidi kanye nezinye i-Hardware yefenisha. Ukuba ngumlingani wethu wesikhathi eside, sizokujabulela ukukusiza ukuthi usebenzise imakethe yakho futhi wandise amandla akho emakethe.
Ingabe uyinkampani yokuhweba noma umenzi?
Siyinkampani efanelekile yokuthengisa ngaphandle kwamanye amazwe, futhi futhi thina siyifektri enomugqa wethu wokukhiqiza wemikhiqizo eyinhloko, ukuze ahlinzeke ngemikhiqizo ehlukahlukene ukuze ahlangabezane nezidingo zemakethe yethu entsha, siqoqe umthombo omkhulu cishe Ama-ameluleki ahlobene ne-Hurmaware eChina, lokhu kusenza sikwazi ukukunikeza noma yiziphi izixazululo ezingezelelweyo ezingezelwe, sihlola amakhasimende anezimakethe ezihlukile, inqubo yokulawulwa kwekhwalithi efanelekile ngaphambi kokuthumela, futhi izinto ezintsha zithuthukiswa ngakunye Isikhathi, futhi singanikeza ngemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso ngokwesidingo sakho esikhethekile. I-Addy ikhethekile ukunikela ngezixazululo zokuma eyodwa kuwe, sihlala sinikeza impendulo esheshayo ne-high-ective. Ngentengo engcono, ikhwalithi ephezulu, insizakalo engcono kakhulu, i-addy ukukhetha kwakho okuhle, ungaya nathi!
Yini ubuncane be-oda lokuthenga kokuqala?
I-MOQ ehlukile yento ngayinye futhi kuncike ezimpahleni ozikhethayo. Isibonelo, i-BALL BALL SLIELDE: 1,500 kuya ku-3,000sets / usayizi, hinge: ama-10,000 ama-PC kuya ku-30,000 PCS / Model, isibambo: I-1,000 kuya ku-3,000 PCS / Imodeli ye-ETC ...
Singasazi kanjani ikhwalithi ngaphambi kokubeka i-oda lesilingo?
Singawathola kanjani amasampula kuwe?
Sizonikeza amasampula wamahhala kuwe ngaphambi kokuthi ubeke i-oda, kufanele ukhokhe izindleko zemithwalo kuphela, usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Express noma vele uhlele insizakalo yokuthathwa.
Isikhathi esingakanani ukulethwa?
Singakwazi ukuletha umkhiqizo cishe ngezinsuku ezingama-20-45 ezincike emikhiqizweni ehlukene, sizohlela ukukhiqizwa uma sesithole idiphozithi yakho uma sesithole idiphozithi yakho. Uma ucela usuku lokulethwa kwangaphambilini, sizoxoxisana ukuze sixazulule futhi sihlele isikhathi sangaphambilini.
Singazi kanjani imininingwane eminingi ngokupakisha?
Singumhlinzeki we-obm we-premium ukupakisha njengezindlela zethu ezijwayelekile uma kungekho zidingo ezikhethekile ekupakisheni, imvamisa sizophrinta ilogo eyakhe i- "addmith" ngokupakisha kwangaphakathi nokupakisha kwangaphandle. Ngaphezu kwalokho, futhi singanikeza insizakalo eyengeziwe ye-OEM kusuka isicelo seklayenti, kepha kuzoba ne-mog enkulu kunezindlela ezijwayelekile. Uma udinga noma yiziphi izinsizakalo zokupakisha esinganikeza ngazo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuze kubonisene ngokubonisana, sikholwa ukuthi sizokwenzela isixazululo esingeziwe.
Yini ilayisha umthamo wesitsha 20ft futhi kungenzeka yini ukulayisha imikhiqizo yokuxuba esitsheni esisodwa?
Yini isikhathi sokukhokha?
Yini okufanele siyenze uma iziphambeko zekhwalithi zenzeka ngemuva kokuthola izimpahla?
Sicela usithumele ngomusa izithombe nge-imeyili enemininingwane nge-imeyili noma ezinye izindlela, i-addy izokuxazulula ngokushesha, uma bekungubu budedengu bethu, sizokubuyisela imali noma siyobuyiselwa imali noma i-free esikhundleni sizohlelwa kanye. Sinikeza insizakalo ethembekile futhi efika ngesikhathi yokuthengisa ukuzuza ukwethenjwa kwamakhasimende amaningi amadala namasha, kufanele weneliseke nge-addith.
Ukuvala okuthambile kwebhola le-3-Fold Ball ukuqhathanisa nemikhiqizo efanayo emakethe, kunezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, idumela elihle emakethe.Addith ifingqa amaphutha emikhiqizo edlule, futhi ngokuqhubekayo uthuthuka. Ukucaciswa kwesilayidi esithambile esithambile esingu-3-Fold Ball kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.Dweba i-Wardrobe Hardware Hardware ethambile yokuvala ibhola ethambile kusuka kuma-slides we-addmith kanye nentengo enhle kakhulu yezandla kanye nentengo esebenza ngezindleko zokuhlinzeka ngezinsizakalo zohlelo lwe-hinge.
I-Hydraulic hinge clip-on | Faka uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. Imininingwane ye-Hydraulic Hinge Clip-on | I-Addy ingeza ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Hardraulic Door Hardraulic Door Hardraulic Door Hinge Clip-on enesisekelo esijwayelekile esivela ku-Addmith Hardware ngentengo enhle yezandla kanye nentengo esebenza ngezindleko
Ama-slide webhola eliboshwe amathathu aqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, anezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. Kubathuthukisa. Ukucaciswa kwesilayidi sebhola elinamabhola amathathu kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.Dweba i-Wardrobe Hardware Hardware Ama-Slides Counder Trains Ama-Slides ane-Addmith ane-Addmith Hardware ene-Craft enhle kakhulu futhi intengo.AdDith esebenza ngemali esebenzayo inikezela ngezinsizakalo zohlelo lwe-Hinge lwe-Hinge kanye ne-One-Stop Horde Service ye-Hardware yefenisha.
I-Stainless T Wind Hund ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. zona. Ukucaciswa kwesibambo sohlobo lwensimbi engagqwali kungahle kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Wardroach Cannet doc304 / SS201 Hardware Hardware Hardware Insimbi ye-T-Shape Tyware T-Type Hardware kusuka ku-Addmith Hardware nentengo ye-Cast.AdDith ye-One-Stop Hardip ye-Hardware yefenisha.
Inkampani yefenisha yefenisha yensimbi engcono kakhulu
Umlenze wefenisha wensimbi we-tapered ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, unezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. . Ukucaciswa komlenze wefenisha wensimbi we-tapered kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.O-rings taperated metal sofa femled Feed Feed Feme Feed umlenze wetafula kusuka ezenzweni ezinhle kakhulu nge-addmith hardware ngentengo enhle ye-craft kanye ne-caric.addith esebenza nge-persite solution service ye-hardware yefenisha.
Ikhwalithi ye-FGV Type Drawer Slider Changer | Angeza
I-FGV Thayipha Ikhabethe Ikhabethe Ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. . Ukucaciswa kwesilayidi se-FGV Type Drawer kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Horp yekhabethe yekhabethe yekhabethe yezomnotho i-FGV yohlobo lwezomnotho kusuka ezengezo ze-addmith ezinobuhlakani obuhle kakhulu kanye nentengo ebizayo ye-
I-Flat Head Square Drive Wood Robertson Screw
I-Flat Head Square Drive Wood Robertson isikulufa iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, idumela elihle emakethe.Addith ifingqa amaphutha emikhiqizo edlule, futhi ngokuqhubekayo uthuthuka. Ukucaciswa kwe-Flat Head Square Drive Wood Robertson Screw kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Flat Head Square Drive Wood Robertson Screw kusuka ze-AddTth Hardware ngentengo enhle kakhulu yezandla kanye nentengo esebenza ngezindleko
Isevisi Yesisombululo Sokumisa Isesekeli yefenisha
Ikhaya Imikhiqizo Ukusebenzela MAYELANA NATHI Icala Izindaba XHUMANA NATHI
I-TEL: I-+86 - 021-5844 6290
Ikheli: Igumbi C02, isakhiwo 6, No.351, Sizhuan Road, Sijing Town, Isifunda sase Songjaing, Shanghai, China.